मनोरञ्जन क्षेत्रः असुरक्षाको लहरोमा बालिका |
मनोरञ्जन क्षेत्रः असुरक्षाको लहरोमा बालिका
प्रकाशित मिति :2018-12-25 14:39:37
गएको हप्ता काठमाडौंको ठमेलमा रहेको दोहोरी रेष्टुरेन्टमा कार्यरत एउटी ‘निर्दयी आमा’को कूकर्मबारे सुनें । त्यो घटनाले छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ । अनि अहिले पनि सोचिरहेछु, ‘संसारकै सबैभन्दा मूल्यवान मानिने मायाकी प्रतिमूर्ति, विश्वासकी धरोहर ‘आमा’ पनि यति निर्दयी हुन्छन् त ?’
श्रीमानको असहयोग र वेवास्तापछि तीन छोराछोरीकी आमा दोहोरी रेष्टुरेन्टमा काम गर्न थालिन् । दोहारीमा काम गर्दा कमाएको थोरै पैसाले उनलाई छोरीछोरी पाल्न र डेरा भाडा तिर्नै पुगेन । अभावै अभावका बीच आफ्नो र छोराछोरीको जेनतेन गुजारा गरिरहेकी उनी विस्तारै पुरुष ग्राहकका अतिरिक्त चाहाना पनि पुरा गर्ने बाटो रोज्न बाध्य भइन् ।
३५ वर्षीया ती महिलाको हिमचिम बढ्छ चितवनका ६५ वर्षीय वृद्धसँग । वृद्ध महिलाकै डेरामै बस्न थाले । त्यो कुरा महिलाकी १४ वर्षकी किशोरी छोरीलाई मन परेको थिएन । तर पनि आमाले तिम्रो अंकल भन्दै कोठामै राख्न थालेपछि उनले मन नपराउँदा पनि केही हुने अवस्था थिएन ।
आमासँग वृद्धावस्थामा जीवनको अन्तिम जस्तै मोजमस्ती गर्न सँगै कोठामा बस्ने ती व्यक्तिले बेला बेलामा छोरीलाई पनि छेडछाड गर्न थाले । उनी आमा र छोरी दुबै जनालाई यौन पार्टनर बनाउने आसय व्यक्त गर्थे । भर्खरै महिनावारी भएकी छोरीलाई हजुरबा उमेरको त्यो बुढोको आनिबानी र व्यवहार देख्दै रिस उठ्थ्यो । तर त्यो कुरा आमाले भने थाहा नपाएझैं गर्थिन् ।
मंसिर २७ गते राती । आमा र ती वृद्ध कोठामै रक्सी खाएर बसिरहेका थिए । राती सुत्ने बेलामा वृद्धले बाहिरबाट जुस ल्याएर आए । आमाले गिलासमा हालेर छोरीलाई खान दिइन् । मध्यराती झल्याँस्स ब्यूझिँदा त किशोरीले आफूलाई पुरै रगतमा लत्पतिएको अवस्थामा पाइन् । योनी, स्तन लगायत शरीरका विभिन्न भाग दुखिरहेका थिए । शरीरमा लुगा पनि थिएनन् । जुरुक्क उठ्न खोज्दा आमा र अंकल भनिएका ती वृद्ध खित्का छोडेर हाँस्दै, एक अर्कालाई चिमोठ्दै, जिस्किदै रक्सी खाइरहेका थिए ।
किशोरीलाई रात कटाउन मुस्किल भो । आफ्नो त्यस्तो अवस्था देखेर पनि आमाले समेत कुनै सहानुभूति नदेखाएपछि उनी बिरक्त भइन् । आमाकै सहयोगमा आफूमाथि वृद्धले बलात्कार गरेको ठम्माइन् । अनि रातभर रुँदै बसिन् । अर्को दिन सहनै नसकेपछि केही वर्ष अघि आफू बसेको काठमाडौंकै एक आश्रय केन्द्रका दिदीलाई फोन गरेर जानकारी गराइन् । उनीहरूकै सहयोगमा महाराजगञ्ज प्रहरीमा केस दर्ता भएपछि आमा र ती वृद्ध पक्राउ त परे, तर किशोरीको संरक्षक कोही छैन । उनकै ठूली आमाले बहिनीलाई छुटाउनका लागि किशोरीलाई बयान बदल्न दबाब दिइरहेकी छन् । किशोरी भने एक गैर सरकारी संस्थाको संरक्षणमा छिन् ।
ठमेलकै एक डान्स बारमा वेटरको काम गर्ने एक महिलाका तीन छोरी र १ छोरा छन् । श्रीमान कहाँ छन् अत्तोपत्तो छैन । ३५ वर्षीया उनका छोरीको उमेर १५ देखि २० वर्ष छ ।
उनले डान्स बारमा काम गरेको पैसाले खान नपुग्ने र डान्स बारमा आउने ग्राहकले दुव्र्यवहार गर्ने गरेको भन्दै आफू सानोतिनो व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न चाहन्छु भनिन् ।
मनोरञ्जन क्षेत्रका महिला तथा बालबालिकाको हक हितका लागि काम गर्ने चेन्ज नेपाल लगायतका संस्थाले उनलाई व्यवसाय गर्न पटक पटक आर्थिक सहयोग पनि गरे । तर ती महिलाले व्यवसाय सुरु गर्दै छोड्दै गर्न थालिन् । कामलाई निरन्तरता दिइनन् ।
अहिले ती महिला फेरि डान्स बारमै काम गर्छिन् । कान्छी छोरी संस्थाकै आश्रयमा राखेकी छिन् । एउटी छोरीले यौन व्यवसाय गर्छिन् । उनको लवाई खवाई, बोली व्यवहार नै फरक छ । मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम महिलाको हकहितका लागि काम गर्नेसंस्थाका प्रतिनिधिको भनाइ अनुसार ती महिलालाई जति गर्दा पनि व्यवसायमा लगाउन सकिएन । अन्ततः उनले छोरीलाई समेत त्यही कुकर्ममा लगाएरै छोडिन् ।
आमा बुबाको ठेगान नभएकी (हाल १६ वर्षीया) किशोरी काठमाडौंको कलंकीमा सडक जीवन बिताइरहेकी थिइन् । १४ वर्षको उमेरमा कलंकीमा आफू जस्तै सडक जीवन बिताइरहेका एक किशोर (हाल १७ वर्ष) सँग उनले बिहे गरिन् । १५ वर्षमा छोरी जन्माइन् ।
सडकमा हुँदै कलिलो उमेरमै यौन व्यवसाय गर्दै आएकी उनले गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा पनि त्यो कामबाट मूक्ति पाइनन् । श्रीमान छोरी च्यापेर छेउमै हुन्थे । उनी बाटोमै ग्राहकसँग मोलमोलाई गर्थिन् । चित्त बुझे ग्राहकसँग गेष्ट हाउसमा जान्थिन् र घण्टा दुई घण्टामा फर्किन्थिन् ।
कतिपय ग्राहकले यौन सम्पर्कका बेला कण्डम प्रयोग गर्न मान्दैनन् रे । गेष्ट हाउसमै प्रति गोटा ५० रुपैया पर्ने कण्डम किन्न कतिपयले लोभ गर्ने । आफूले किन्ने हैसियत नहुने । त्यही भएर अहिले त उनलाई भिरुङ्गी समेत भइसकेछ ।
यौनाङ्गमा भएको भिरुङ्गीको संक्रमणले उनलाई च्याप्न थाल्यो । उपचार गर्ने पैसा भएन । केही हप्ता अघि उनी गैर सरकारी संस्थाको सम्पर्कमा आइन् । उनको उपचार पनि गरियो । तर अब यो काम गर्दैनौं, हामी सानोतिनो व्यवसाय गर्छौ भनेको त्यो जोडी संस्थाको सम्पर्कमा छैन । उनले बोकेको फोनमा सम्पर्क हुँदैन । उनीहरूलाई सहयोग गरेकी संस्थाकी प्रतिनिधिले किशोरावस्थाको त्यो जोडीसँगै उनीहरूको एक वर्षीया छोरीप्रति निकै चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
हुक्का बारको काउन्टर सम्हालेका मालिकको ज्याङ्गो जिउडाल । घुमे्रको, बाक्लो, लामो कपाल पछाडि लगेर बानिएको छ । हुक्का बारमा चुरोट र हुक्काको बाक्लो धुवाँ । अलिअलि कुहिरो छाए जस्तै । काउन्टर रहेको अगाडिको क्षेत्रमा थोत्रा सोफा छन् । मान्छे कोही छैन । भित्रै पस्नै लाग्दा मूल ढोकाको सिधै अगाडिपट्टी रहेको भान्सामै आँखा ठोक्किन्छन् । करिब ५ फुट हाइटकी गोरी, कोरीबाटी गरेकी युवती केही खानेकुरा मुछिरहेकी थिइन् ।
केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, कालीमाटी प्रहरी, पत्रकार, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १४ का जनप्रतिनिधिले यसै साता काठमाडौंको कलंकीमा रहेका खाजा घर, रेष्टुरेन्ट र हुक्का बारमा अनुगमन गर्दा सहभागी हुने अवसर मिल्यो । अनुगमनका क्रममा हुक्का बारको एक दृश्यले मेरो मानसपटलमा अमित छाप बसाइदियो ।
हामी भित्र पसेर सोधपुछ गर्न लाग्दा उनले पुलुक पुलुक हामीलाई हेरिरहिन् । केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका रबी गौतम र म हुक्का बारको क्याबिनमा गयौं । क्याबिनमा थिइन् करिब १५, १६ वर्षकी बालिका । ग्रन्च जिन्स पाइन्टमा घुँडासम्म नपुग्ने कुर्ता र सल लगाएकी । उनको अनुहारमा थप मेकअपका लागि कुनै ठाउँ थिएन । तिनै बालिका उनकै उमेरको देखिने जुँगाको रेखी समेत नबसेका बालकसँग लुटुपुटु गरिरहेकी । उनीसँगै टास्सिएर शरीर मुसारिरहेकी । केटाको अगाडि बियरको आधा बोत्तल र गिलास । हातमा हुक्काको पाइप ।
त्यो दृश्यले त्यो ठाउँ कलिला केटाकेटीहरूको लागि सुरक्षित ठाउँ हैन भन्ने सहजै बुझिन्थ्यो । त्यो दृष्य धेरैबेर हेरिरहन सकिने थिएन । बाहिर आएर काउन्टरका वयस्क पुरुषसँग कुरा गर्न थाल्यौं । हाम्रो कुरा सुनेर तीनै जुँगाको रेखी नबसेका केटा बाहिर निस्किए । ती बालिकासँगै अर्की १७/१८ वर्षकी झैं लाग्ने किशोरी पनि निस्किइन् । दुबै जनाको नागरिकता पनि बनेको रहेनछ । एउटा पोखराकी र अर्की धादिङकी रहेछन् ।
विडम्वनाको कुरा त के भने हुक्का बारका ग्राहक केटा बालक र सेवाग्राही बालिकाको त्यो अश्लील व्यवहारको रमिता हेरिरहेकी थिइन्, पाँच वर्षे बालिका ।
अघि भान्सामा रहेकी गोरी, चिटिक्क परेकी महिला हातमा सेकुवा जस्तो पोलेको मासुका चोक्टासहित काउन्टरनेर आइन् र अघिकी तिनै रमिते बालिकालाई खुवाउन थालिन् ।
ती महिलाले यी नानीहरू भर्खरै काम गर्न थालेका हुन् । मसँगै बस्छन् । छोरी जस्तै राखेका छौं भन्न थालिन् । उनको कुरा सुनेर रबी गौतमले अलि कडा रुप भने, ‘तपाईं एउटा नारी । तपाईकी यी पाँच वर्षकी छोरीलाई खुवाउँदै गर्नुभएको मासु कस्तो कमाईको हो ? यी अबोध बालिकालाई अर्का अबोध बालबालिकाको अश्लील हर्कतको रमिते बनाउन अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन ? तपाईकी छोरीले पाउने शिक्षा कस्तो होला ? के हुन्छ यिनको भविश्य…….।’
उनले यसो भनिरहँदा काउन्टरवाला पुरुष र बच्चीकी आमा (श्रीमान श्रीमती) निशब्ध भए ।
केही बेरमा काउन्टरवालाले सोधे, ‘सर हाम्ले पसलमा केटी मान्छे राख्नै नहुने हो र ?’ रबी गौतमले थपे, ‘राख्न पाइन्छ । तर १८ वर्ष माथिका मात्रै । र अर्को कुरा हुक्का बारलाई यौन पसल जस्तो बनाउन पाइँदैन । कलिला बालकलाई धुम्रपान, मध्यपान बेच्न पनि पाइँदैन ।’
काउन्टरवालाले केही दिनमै हुक्का बारमा काम गर्ने बालिकाहरूलाई घर पठाउने र नागरिकता बनाइदिने प्रतिवद्धता गरे ।
खाजा घर र रेष्टुरेन्टमा ग्राहकको सेवामा खटिनेमा सबै उमेर नपुगेका बालिका र किशोरीहरू थिए । सोधपुछका क्रममा कसैको पनि नागरिकता बनेको भेटिएन । न त उनीहरू काम गर्ने ठाउँमा नियुक्ति पत्र दिने व्यवस्था रहेछ न त बिदाको व्यवस्था नै ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १४ का वडा सदस्य बसन्त महर्जनले उक्त हुक्का बारको गतिविधी आफ्नै आँखाले नराम्रो देखेकाले अब वडाले हुक्का बारको नविकरण नगर्ने चेतावनी दिए ।
अनुगमनका क्रममा खाजा घर र रेष्टुरेन्टमा ग्राहकको सेवामा खटिनेमा सबै उमेर नपुगेका बालिका र किशोरीहरू थिए । सोधपुछका क्रममा कसैको पनि नागरिकता बनेको भेटिएन । न त उनीहरू काम गर्ने ठाउँमा नियुक्ति पत्र दिने व्यवस्था रहेछ न त बिदाको व्यवस्था नै ।
केही गरी सन्चो नभएर काममा आउन नसकेको दिन दिनको एकसय पैंसठ्ठी रुपैयाँ काटिदोरहेछ । जागिर पनि मालिकले चाहेसम्म मात्रै हो । जति धेरै ग्राहक रिझाउन सक्यो, त्यति धेरै जागिर अवधि ।
मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत बालिकाको हकहितका लागि काम गर्दै आइरहेको संस्था चेन्ज नेपालकी सृजना दाहाल मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने बालिका र महिला निकै असुरक्षित रहेको बताउँछिन् ।
दाहालका अनुसार मनोरञ्जन क्षेत्र र त्यहाँ कार्यरत महिला तथा बालिकालाई समाजले सम्मानजनक दृष्टिले हेर्दैन । यसैको फलस्वरुप दोहोरी रेन्टुरेन्ट, डान्स बार, खाजा घर, क्याबिन रेष्टुरेन्ट जस्ता ठाउँमा सेवाका लागि आउने पुरुष ग्राहकले त्यहाँ कार्यरत महिला तथा बालिकालाई यौनकर्मीको रुपमा हेर्छन् र त्यही दृष्टिकोणले दुव्र्यवहार गर्छन् ।
जसका कारण रहर वा बाध्यताले त्यस्तो ठाउँमा काम गर्ने अधिकांश महिला तथा बालिकाहरू ग्राहक र मालिकबाटै यौन दुव्र्यवहार खेप्न बाध्य हुन्छन् ।
मनोरञ्जन क्षेत्रका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा केही दिन अघि काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्रहरी बीच काठमाडौंमा एक गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो ।
एक वडा सदस्य भन्दै थिए, ‘हाम्रो वडामा स्थायी बसोबास गर्ने एक जना व्यक्तिका सन्तान पनि सडकमा छैनन् । सडकमा भएजति सबै बालबालिका उपत्यका बाहिरबाट आएका व्यक्तिका छोराछोरी हुन् ।
उनको कुरा सुनेर गोष्ठीमा सहभागी धेरैले जिब्रो टोके । एउटा जनताको प्रतिनिधिले सडक बालबालिकाको विषयमा राखेको धारणाले उनी बालबालिकाको सवालप्रति कति संवेदनशील छन् भन्ने कुरा झल्काइरहेको थियो ।
उनको कुरामा असहमति जनाउँदै आयोजक संस्थाका प्रतिनिधिले भने, ‘तपाईंको वडामा भएका सडक बालबालिका नेपालको कुनै जिल्लाका मात्रै होइन, विदेशका भए पनि उनीहरुको विषयमा तपाईंको वडाले सोच्नुपर्छ । मेरो वडाको होइन भनेर पन्छिन पाउनुहुन्न ।’
बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र परिपूर्तिका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बालअधिकारको पक्षमा भएका कानून कार्यान्वयन गर्न र थप कानून आवश्यक भए बनाएर लागू गर्न जरुरी छ भन्छिन्, अधिकारकर्मी सृजना दाहाल ।
डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स बार जस्ता कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले २०६५ सालमै भनिसकेको छ ।
२०६२ सालमा अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा, राजु चापागाईं, रमा पन्त, कविता पाण्डे र शर्मिला श्रेष्ठले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि श्रीमजीवि महिलाहरु प्रति डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स बार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पिडन नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले निर्देशिका जारी गर्यो ।
तर दशक बितिसक्दा पनि यो निर्देशिका कार्यान्वयन भएको छैन । न त मनोरञ्जन क्षेत्रमा कामगर्ने महिला तथा तिनका छोराछोरी सुरक्षित हुन सकेका छन् ।
त्यसो त ‘बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५’ को दफा ६६ को उपदफा २ को (क) मा ‘बालबालिकालाई धुम्रपान, मध्यपान वा जुवातास जस्ता कुलतमा संलग्न गराउने काम बालबालिका विरुद्धको कसुर हो’ भनिएको छ ।
त्यस्तै दफा ६६ को (ख) मा बालिगहरूका लागि खोलिएका डान्स बार, क्यासिनो जस्ता मनोरञ्जन स्थलमा प्रवेश वा प्रयोग गराउने काम र यसैको उपदफा ३ को (ग) मा यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गर्ने, फकाउने, दबाब दिने वा धम्काउने काम गर्नु गराउनुलाई बालबालिका विरुद्धको कसुर मानिएको छ ।
केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका बाल अधिकार स्रोत व्यक्ति रबी गौतम मनोरञ्जन क्षेत्रका कार्यरत बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि बनेको ‘बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५’ को प्रचार प्रसार हुनै नसकेको बताउँछन् ।
स्थानीय तह, प्रहरी र सरोकाराला संस्थाहरूले विद्यमान ऐन, कानूनको जानकारी गराउने र मनोरञ्जन क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमन गर्ने कार्यमा तदारुकता देखाई कानून बिपरित काम गर्नेलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्न सुझाव दिन्छन् ।
यदि त्यसो हुन नसकेको खण्डमा नेपालको मनोरञ्जन क्षेत्र व्यवस्थित र सम्मानित हुन त सन्दैन नै । त्यहाँ कार्यरत हजारौं महिला तथा बालबालिका पनि सुरक्षित हुन सक्दैनन् ।